IiKnights eziSixhenxe eziNtsha ezi-2 ziQaliswa kwihlabathi liphela ngoMdlalo osimahla wokudlala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IiKnights eziSixhenxe eziNtsha ezi-2 ziQaliswa kwihlabathi liphela ngoMdlalo osimahla wokudlala
Abalandeli bomdlalo we-Netmarble wokuqala kunye nomdlalo omde odlala indima yeselula ii-Seven Knights ngoku banokuqalisa isahluko esitsha, esinzulu, kunye nesintywilayo se-cinematic ye-franchise njenge-Seven Knights 2 isenza ngokusemthethweni isiqalo sayo kwihlabathi jikelele. Umdlalo ngoku uyafumaneka njengokhuphelo lwasimahla kwiVenkile yeApp kunye noGoogle Play. Abasebenzisi banokubukela yonke ividiyo entsha yokuphehlelelwa kwiSeven Knights 2 isitishi sikaYouTube.
Ii-Seven Knights 2 zenzeka kwiminyaka engama-20 emva komdlalo wokuqala we-Seven Knights. Eli bali elitsha amaziko kwi Daybreak Mercenaries ekhokelwa Lene, intombi Eileene, ngubani na ilungu Seven Knights kumdlalo wokuqala. I-Daybreak Mercenaries iqalisa uhambo lokufumana uRudy, ilungu lokugqibela lee-Seven Knights, emva kothotho lweziganeko ezibandakanya intombazana engaqondakaliyo egama linguPhiné. Abalandeli kwihlabathi liphela banokuqalisa ukuqokelela kunye nokuphuhlisa amaqhawe anomdla ngelixa bezibandakanya kwibali elinzulu nelintywilayo le-cinematic.
Ukubhiyozela ukuqaliswa komdlalo, i-Netmarble icwangcisa umnyhadala othi “Umphathi weMercenary oKhethekileyo wokuNgena ngeMihla yonke”, evumela abasebenzisi ukuba bavule imivuzo eyahlukeneyo, kubandakanya iBanga leNtsomi elithi 'iNgcwele yokuKhanya Karin' ngomhla wesi-7 wokungena kumdlalo.
Iimpawu eziphambili abadlali abanokukhangela phambili kuzo ekusungulweni ziquka:
• AmaQhawe angama-Charismatic aQokelelekileyo: Kukho inani lamagama angama-46 akhoyo onokuthi uwaqokelele ekusungulweni, kubandakanywa nabalinganiswa abaqhelekileyo abavela kwii-Seven Knights zantlandlolo ezidityaniswe ngabalinganiswa abatsha aba-Seven Knights 2.
• Imilo yeeBoss ecela umngeni:
o Abadlali banokujonga phambili ekwenzeni amaqhinga ngedesika ezahlukeneyo besebenzisa iingoma ezahlukeneyo zamaqhawe, iifomati kunye nezilwanyana zasekhaya.
o Ukongeza, abadlali baya kubandakanyeka kumadabi besebenzisa izakhono ezinembonakalo emangalisayo, ngelixa bethatha inxaxheba kumadabi eqela lexesha lokwenyani belawula ukuya kuthi ga kumagorha amane ngaxeshanye.
• Ibali elinzulu, elintywilayo leCinematic: I-Seven Knights 2 inebali elinzulu nelintywilayo elineeyure ezimbini ze-cinematic cutscenes ezikumgangatho ophezulu ukwenzela abalandeli abadlala indima ukuba banandiphe.
I-Seven Knights 2 yi-RPG ye-cinematic ye-cinematic evumela abadlali ukuba baqokelele kwaye baphuhlise amaqhawe anamandla azo zonke iimilo kunye nobukhulu ngelixa bebandakanyeka kwibali le-cinematic enzulu kunye ne-immersive enkosi kulawulo lwexesha lokwenyani kunye nokulayisha ngaphakathi komdlalo kunye nokudityaniswa kwezibalo zamaqhawe, ukwakheka, kunye izilwanyana zasekhaya. Idlala uluhlu lwabalinganiswa ababoniswe ngemizobo ekumgangatho ophezulu emangalisayo exhaswa yi-Unreal Engine 4, ii-Seven Knights 2 ziya kuntywilisela abadlali kulandelelwano lokwenyani olunomdlalo omnandi kunye nolutsha lwe-Seven Knights elonwabele abadlali kwihlabathi liphela.
Ukuza kuthi ga ngoku, ii-Seven Knights zibone izigidi ezingama-60 zokukhutshelwa kwihlabathi liphela. I-Seven Knights 2 nayo iphumelele eKorea, ibekwe kwindawo #1 kwiVenkile yeApp kunye ne-#2 kuGoogle Play ngokwengeniso efunyenweyo emva kokusungulwa kwayo ngoNovemba ka-2020. Emva kokusungulwa kwehlabathi jikelele, ii-Seven Knights 2 ziya kufumaneka ukuba zidlale ngeelwimi ezilishumi elinambini, kuquka isiNgesi, isiJapani, isiTshayina Esenziwe Lula, isiTshayina Semveli, isiThai, isiPhuthukezi, iSpanish, isiJamani, isiTaliyane, isiFrentshi, isiRashiya, nesi-Indonesian.